Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ngizizwa ngingosolwe kakhulu enhliziyweni yami sonke isikhathi lapho ngibona amazwi kaNkulunkulu athi: “Abantu abanonya nabanesihluku! Ubuqili nokusongelana, ukududulana, ukugijimela udumo nokuceba, ukubulalana—kuzophela nini? UNkulunkulu uye wakhuluma izinto eziningi kakhulu, nokho akekho noyedwa oye waziqonda. Abantu benza izinto becabangela imindeni yabo, futhi becabangela amadodana namadodakazi abo, imisebenzi yabo, ikusasa labo, ukuma kwabo, ukuqhosha nemali, benzela ukugqoka, ukudla nemizimba yabo—yini eyenzelwa uNkulunkulu ngempela? Ngisho nalabo abenza okuthile egameni likaNkulunkulu, bambalwa kakhulu abamaziyo uNkulunkulu. Bangaki abangacabangi ngezinto abazifunayo lapho benza okuthile? Bangaki abangabacindezeli abanye noma babacwase ngoba nje befuna ukuvikela igama labo? Ngakho, uNkulunkulu uye wenqatshwa ngokuqinile futhi wabulawa izikhathi eziningi. Abahluleli abangenakubalwa abenza ngendlela yobulwane bamenqabile uNkulunkulu, okuwukubethela uNkulunkulu esiphambamweni futhi” (“Ababi Nakanjani Bayojeziswa” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngicabanga emuva ukuthi angilithungathanga kanjani iqiniso, ukuthi ekugcwaliseni izibopho zami ngangilokhu ngincintisana nabalingani bami engangisebenza nabo, ukuthi ngenxa nje yesikhundla negama lami kanye nokuhlomula kwami ngangiye ngicindezele noma ngichithe okushiwo abanye—ukuthi ngazilahlekisela kanjani empilweni yami, kanye nasemsebenzini kaNkulunkulu. Yize noma uNkulunkulu ayengihlelele izimo eziningi zokungisindisa, zavele zayima emthumeni futhi ngahluleka ngokuphelele ukubona inhloso kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu waqhubeka nokungidabukela, ukungisindisa, futhi kwaba lapho kuphela emva kokusolwa nokujeziswa okuqhubekayo lapho ngaqala ukuphaphama ngase ngiyaqonda kahle isifiso sikaNkulunkulu sokusisindisa, ngabeka eceleni izintshisekelo zami zokufuna izikhundla nokwaziwa emphakathini ngase ngiqala ukuziphathisa okomuntu kancane.
NgoNcwaba wangonyaka ka-2012, udadewethu owayengamele umsebenzi wethu wakhulumisana nami, engithuma ukuba ngigcwalise isibopho somsebenzi wami kwenye indawo. Ngalesi sikhathi ngavuma ngimagange, kodwa ngaphambi kokuba ngihambe wathi: Kungcono ukuthumela lo mfowethu ukuba asebenze nawe, kuyoba kuhle kakhulu emndenini kaNkulunkulu….” Wabuza umbono wami, mina ngathi: “Kulungile, ngizimisele ukusebenza naye.” Futhi sathi uma sibonana emhlanganweni, wayevulelekile nje kimina: “Angivumelananga nokuba bakhethe wena, ukusebenza kwakho kokuhlanganyela akuncomeki njengokwami!” Leso sitatimende sokudelela sangishiya nginobuyaluyalu ngaphakathi. Ngangicabanga ukuthi ukuchema kwami ngalo mfowethu kwase kungemuva kwami, kodwa ngithe uma ngizwa lokho kwakhola okuthile okuqubukayo ngaphakathi kimina: Kwaze kwakubi bo, bekungafanele ngivume ukuhamba naye. Wazi konke ukwahluleka kwami. Ngangicabange ukuthi uma ngifika ngizoqala umsebenzi wami omusha ngangizokwamukeleka njengomafikizolo! Kodwa manje yini eyayisengenziwa? Ngaphoqa ukumamatheka ngashaya sengathi kwakungazange kwenzeke lutho, ngaphakathi ngibe ngicabanga ngithi: Angenzi umsebenzi oncomekayo ekuhlanganyeleni nabazalwane, kodwa ngakhethwa kuqala ngoba ngingcono kunawe. Uma ungangikholwa, thula ubukele uzobona! Sahamba saya endaweni entsha saziphonsa emsebenzini wethu. Ekuqaleni, uma sihlangana nalabo esisuke singabo emsebenzini, ngangiye ngithandazele ukuba ngikwazi ukwehlula inyama, ngikwazi ukuzibamba ngenxa yokuba sisebenze ngozwano. Ngalalelisisa ukuba wayekhuluma kanjani nalabo bantu esasisebenza ngabo mayelana nezimo zabo kanye naye, ngenkathi yomsebenzi wevangelo ngangixoxisana nabo. Emva kwesikhashana, ngabona ukuthi ukuxoxisana kwakhe nabantu kwakucace kahle kunokwami. Ngesikhathi semihlangano nabantu esasisebenza ngabo ngangingafuni ukubeka nelilodwa vo igama ekuhlanganyeleni. Ngangifisa ukuba leyo mihlangano isheshe iphele futhi ngifuna ukubaleka. Sasibhekelele indawo enkulu kakhulu ngaleso sikhathi, futhi ngaqhamuka necebo: Uma sasisebenza ngokwahlukana ngangingeke ngixakaniseke kangaka. Ngithe uma ngichazela umfowethu lokhu wavuma: “Ubungako bendawo benza ukusebenza kube lukhuni, kungangcono ukuba siyicaze.” Ngithe uma ngihlangana nababengaphansi kwethu ngingedwa ngakwazi ukukhuluma nabo kahle, ngixoxisana futhi ngihlela izinto, ngabathwalela “umthwalo” omkhulu bona. Kungekudala ngayibona imiphumela kuzona zonke izingxenye zomsebenzi wami, ngenkathi umfowethu yena wayengaqhubi kahle neze. Angenzanga lutho ngalokho, kwaba sengathi kwakungendaba engithintayo. Emhlanganweni umholi wethu wathola ukuthi sasisebenza ngokwahlukana wabe esesitshela ukuthi izibopho zomsebenzi wethu zithi kufanele sisebenzisane. Kodwa saqhubeka nokusebenza ngokwahlukana, sisebenzisa izaba zokuthi sobabili sasazi umsebenzi wethu kangcono. Ngesaba ukuthi umholi wethu wayezongigxeka angiyanga endaweni okwakusebenzela kuyona umfowethu ukuze ngiyokhuluma nabantu ababengaphansi komsebenzi wakhe, kodwa ngezwa sengathi akukho ngaphansi kwendawo yami. Uma ngikhulume kahle kubonakala sengathi umfowethu uyena owayethola ukunconywa. Ngakho ngabhekana nemizwa eminingi futhi ngenza izaba, ngithi nganginomsebenzi wokuhlela izinto okwakufanele ngiwenze, ngibaleke. Umfowethu waqhubeka ukungaboni miphumela, kodwa mina ngaqhubeka nokungazisoli noma ngizwe nginokwesaba—Ngangingamesabi neze uNkulunkulu, ngaze nganganaki ngisho nemiyalezo eminingana evela kumholi wethu. Lokhu kwaqhubeka kwaze kwafika isikhathi sokubika ngomsebenzi wethu esesiwenzile, lapho ngathuka khona: Yize noma indawo yami yayinabantu abaningi, uma izindawo zombili sezihlanganiswa izinombolo zazincane kakhulu. Ngaqala lapho-ke ukwesaba. Ngangichithe isikhathi ngizama ukuzibonakalisa, ukufeza izinhloso zami ngiziveze ukuthi ngingasebenza kangcono kanjani kunaye, ukuthi ngangingcono kunaye ekwenzeni umsebenzi webandla. Kodwa umsebenzi webandla endaweni yakhe wawusumile nse—futhi lokhu okungenhla kwakungamele kwenzeke nanini na. Mina ngangibe yisithiyo ekwenziweni komsebenzi kaNkulunkulu. Akukho okunye engangingakwenza ngaphandle kokubuka emazwini kaNkulunkulu ukuze ngibone umsuka nembangela yalezi zimo. Ngabona lokhu okulandelayo: “Nonke, ngamunye, njengabantu abakhonza uNkulunkulu, kufanele nikwazi ukuvikela lokho okufunwa yibandla kukho konke enikwenzayo, kunokuba nizicabangele nina. Akwamukelekile ukusebenza wedwa, ukuhlala nibukelana phansi. Abantu abaziphatha kanjalo abakufanele ukukhonza uNkulunkulu! Abantu abanjalo banesimo esibi; akukho nobuncane ubuntu kubona. BawuSathane ngokugcwele! Bayizilwane! Namanje, izinto ezinjengalezi zisenzeka phakathi kwenu; nize nihlaselane ngenkathi yokuhlanganyela, nifune ngenhloso izinto eningacasha ngazo futhi nize nibe bomvu ebusweni nilokhu niphikisana ngodaba oluthile olungabalulekile, kungekho muntu ofuna ukuhoxa, lowo nalowo muntu efihlela omunye imicabango yakhe ejulile, ebukisisa omunye futhi ehlala eqaphile. Ngabe lolu hlobo lwesimo lukufanele ukukhonza uNkulunkulu? Kukhona yini umsebenzi onjengowakho ongondla ngawo abafowenu nodadewenu? Awugcini nje ngokungakwazi ukuqondisa abantu endleleni yokuphila efanele, kodwa empeleni ufaka izimo zakho ezikhohlakele kubafowenu nodadewenu. Ngabe awubalimazi abanye? Unembeza wakho mubi, futhi ubole ngokuphelele! Wena awungeni kokoqobo, futhi awulenzi iqiniso. Ngaphezu kwalokho, uveza imvelo yakho yobudeveli kwabanye ngaphandle kwamahloni. Awulazi nhlobo ihlazo! Laba bafowenu nodadewenu babekwe kuwe, kodwa wena ubayisa esihogweni. Awuyena umuntu obolelwe ngunembeza? Awunamahloni neze!” (“Khonzani Njengoba Kwakwenza Ama-Israyeli” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu akhahlayo angembula imvelo yami yangempela angishiya nginamahloni. Kwakungenxa yokwenyuswa nguNkulunkulu nomusa ukuba ngangikwazi ukugcwalisa lesiya sibopho. UNkulunkulu wayengithembe ukuba ngilethe odade nabafowethu kuyena. Kodwa angizange ngingene kokoqobo, angizange ngiliphile iqiniso, futhi ngenxa yegama lami kanye nesikhundla emphakathini ngazishaya indiva izintshisekelo zomndeni kaNkulunkulu. Ngalwa ngokusobala kanye nasesithe nomfowethu, ngazisebenzela ngedwa. Manje yisikhathi sokusabalalisa ivangeli, futhi uNkulunkulu ufisa ukuthi labo abalifuna ngokweqiniso masisha babuyele emndenini kaNkulunkulu. Kodwa ngathalalisa okwakuyimisebenzi yami futhi ngangamthandi uNkulunkulu, angizange ngibe nandaba nalokho okwakuyisifiso Sakhe esikhulu futhi ngilethe labo ababefuna indlela yeqiniso kuYena uNkulunkulu. Ngazifunela isikhundla sokwaziwa, lezo zinto eziyize leze, ukuze ngizakhele igama kunokuba ngisize abanye. Angizange ngikhulume ngezinkinga emsebenzini wethu, nginethemba lokuthi umfowethu uzosilela emva kwami. Nganginomona ngamaphuzu ayenamandla kakhulu kuwona, noma ngishaye sengathi angiwaboni, futhi ngathatha umsebenzi ngengomdlalo lapho ngangibukisa futhi ngiqholoshe ngami nengikwenzile bese ngimgxeka umfowethu. Ngangigcwele ububi, ngingenabo ubuntu. UNkulunkulu uyabenyanya abantu abanjalo, futhi ukube ngangingashintshi ngangizomsebenzela kanjani Yena? Uma nganginganeni kokoqobo ngangizobaletha kanjani abafowethu nodade kuNkulunkulu? Ngigcwele izinyembezi, ngeza kuNkulunkulu ngathandaza: “O Nkulunkulu! Ngenza iphutha, konke lokhu kwakungukuhlubuka kwami. Ngahluleka ukucabanga ngezifiso Zakho, futhi ukuze ngizibonakalise ngalwa nomfowethu, ukuze ngimehlule ngaziba unembeza wami ngangagcwalisi izibopho zami. Manje ivangeli likhubaziwe futhi mina ngenze isiphambeko phambi Kwakho. Kodwa ngifisa ukuphenduka bese ngiyashintsha, ukuba ngisebenze ngokuzwana nomfowethu bese ngenza umsebenzi wevangeli ube namandla kakhulu.
Ngabona ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi: “Lapho nisebenzisana, kufanele nifunde ukufuna iqiniso. Ungathi, ‘Anginakho ukuqonda okucacile ngale ngxenye yeqiniso. Yikuphi okuhlangenwe nakho onakho?’ Noma, uthi, ‘Unokuhlangenwe nakho okuningi kunokwami kule ngxenye; ngicela ungiqondise.’ Ngeke lokhu kube yindlela enhle yokukwenza? Senilalele izintshumayelo eziningi, futhi kukhona esenihlangane nakho ekukhonzeni. Uma omunye engafundi komunye, nisizane, futhi nelekelele lapho omunye wenu ebuthakathaka khona lapho nenza umsebenzi emabandleni, ningazifunda kanjani-ke izifundo? Noma nini lapho nihlangana noma nayiphi into, kufanele nihlanganyele nabanye ukuze izimpilo zenu zizuze. Ngaphezu kwalokho, kufanele nihlanganyele ngokucophelela ngezinto zanoma yiluphi uhlobo ngaphambi kokuthatha izinqumo. Ukwenza kanjalo kuphela okunenza nithwale umthwalo webandla kunokuba nenze izinto ngokungazimiseli nje. Emva kokuvakashela onke amabandla, kufanele nihlangane nihlanganyele ngazo zonke izindaba enizitholayo nezinkinga enihlangane nazo emsebenzini wenu, bese nixoxa ngokukhanyiseleka nokukhanyelwa enikutholile—lokhu kuyindlela yokwenza ebaluleke kakhulu. Kufanele nifinyelele ekubambisaneni ngokuzwana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, ukuze kuzuze ibandla, nangenhloso yokugqugquzela abafowenu nodadewenu. Kufanele nibambisane, lowo nalowo alungise omunye futhi afinyelele emphumeleni womsebenzi ongcono, ukuze akhathalele intando kaNkulunkulu. Yilokhu okuwukubambisana kweqiniso, futhi yilabo kuphela abakwenzayo lokho abazozuza ukungena okuyiqiniso” (“Khonzani Njengoba Kwakwenza Ama-Israyeli” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Emazwini kaNkulunkulu ngabona indlela yokwenza ukungena futhi ngakwazi ukusebenzisana kanye nabanye. Ngaqonda izifiso zikaNkulunkulu: Wonke umuntu unamaphuzu anamandla kuwona, futhi uNkulunkulu ufuna wonke umuntu asebenzise lawo maphuzu emsebenzini womndeni kaNkulunkulu, kanti ekwenzeni lokho amaphuzu abantu ababuthakathaka kuwona ayonxephezeleka. Ukusebenza naloya mfowethu yikona kanye engangikudinga. Ngangibuthakathaka ekukhulumeni iqiniso, futhi ngenxa yothando lukaNkulunkulu ngamataniswa naye, ukuze lapho emandla khona kwemboze lapho ngibuthakathaka khona. Kodwa angikubonanga lokho, futhi lapho nginomfowethu lona angikwazanga ukucela usizo lwakhe lapho ngangingaqondi khona. Kwesinye isikhathi uma ekhuluma nami ngangingazimisele ukulalela. Ngangiqophisana naye ngifuna isikhundla sakhe, ngilimaza impilo yami kanye nomsebenzi wevangeli. Ezinsukwini ezalandela ngazama ukuzijwayeza ukungena kuleli phuzu lokukhuluma iqiniso, ngibuza umfowethu lo lapho ngangingaqondi khona noma ngingaboni ngokucacile: Ngingathanda ukuba uxoxisane nami mayelana nalolu daba lweqiniso, njengoba mina ngingacacelwa kahle. Ngaphinde ngambuza mayelana nezinkinga zomsebenzi wami: Angikuqondi kahle lokhu, ungangicebisa? Kusukela ngaleso sikhathi, safunda omunye komunye futhi sasebenza ngokusizana uma sihambela amabandla, kanye nalapho sihlangabezana nenkinga sasibonisana, sindawonye sithole amazwi kaNkulunkulu okusombulula izinkinga zebandla. Saphenduka abalingani abasebenzisanayo ngokwasemoyeni, samukelana omunye nomunye, sanakekelana, sakwazi ukuqondana omunye nomunye. Kwesinye isikhathi imibono yethu yayiye yehluke, kodwa inqobo uma ihlomulise izimpilo zabafowethu nodade kanye nomsebenzi womndeni kaNkulunkulu, sasiye sibe sesiyavumelana. Ngisho noma singabukeka njengeziwula kubantu kodwa sasiye sibeke eceleni izifiso zethu. Sasebenzisana ngentokozo, futhi zonke izingxenye zomsebenzi wethu zachuma.
Okwedlule: Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela
Okulandelayo: Ngafunda Ukusebenza Nabanye